I-Bluetooth Glorious Self Ukulinganisela Izikuta - Jomo Technology Co., Ltd
Nakuba, enye yezindlela ezinhle kakhulu ukuba uthenge i umdayisi bangempela futhi kahle-onedumela elihle lokwenza zibe yize nethemba iyiphi kwesifo esinjalo. Ngale ndlela ngeke ulahlekelwe indlela yakho futhi akudingeki ukuba sikhathazeke okuningi Mayelana izimoto ophambana nazo. I 2 Wheel Ukulinganisela Scoote r ngu ukuphila kwebhetri Powerboard`s ilungile, futhi uzoba sengeneme nale iyunithi ngaso sonke isikhathi njengoba kahle. Ungase uyohamba isikuta esesikhundleni inkomba ibhethri kuwo ukubona ezingeni ikhono ibhethri. Bheka ADA Necessities ngoba Zabakhubazekile, Mobility Izinsiza, kanye Okunye Energy-Icindezelwe Mobility Amagajethi okuyinto ungafunda lapha. Ngakho ukufunda 8.5inch Smart Balance Scooter-Bluetooth hoverboard amasondo enkulu K7 Uhlolojikelele lapha phambi ethenga ke. Nakhu nice ukuhlolwa isiqophi esifingqa eziningi lokhu. On lokuhambisa phezulu in fashion, thina ukuxhumanisa wena ku umphakeli ngemva yakho ifunde ku Uhlolojikelele thina ihlanganiswe futhi ngizobe abaxhumene yenkampani ngaphakathi US
Kufanele wena kuphela ufuna ukwenza ukusetshenziswa isikuta sokuzilibazisa eyingqayizivele self sekulinganisa hoverboard ngeke sibe sikhulu kunesihlalo ngokwanele. Futhi, Scooters konke sezwe, futhi kufanele wasebenzise odakeni, iqhwa, ezitaladini nesihlabathi evele. Ekuqaleni, self sekulinganisa hoverboard k7 kuyinto amasondo 8.5inch enkulu futhi off-road okuyinto efanelekayo lolwandle ogibele. Ngakho-ke has omuhle ogibele isipiliyoni. Okwesibili, 500W izinjini, amandla eqinile. Okwesithathu, ezimbili uhlelo umbadlana, ngcono ukukhiqiza futhi emva-yokuthengisa. Ngaphandle, kuba imodi ayimfihlo okukhethekile ukubukeka patent, esiyingqayizivele ngaphezulu. Noma kunjalo, iqembu wakhuthaza kuyahambisana ne izishaya enenhloso zokuthola izincwadi ezingokomthetho ukusetshenziswa kwazo. Kufanele uthenga eyodwa? Ngakho, ngaphambi kokuba uthenge hoverboard ukuqinisekisa ukuthi ibhethri yayo ngempumelelo evikelwe futhi iza ukuphathwa emihle ukushaja iyunithi. Ingabe Wadlulela Ul2272 qinisa?
I Powerboard ngu Hoverboard kungase kube cishe eqolo Scooters self-kuyabe kukhona futhi ezibuza wonke umuntu umbuzo sithi: "Ingabe intengo ukubaluleka? I Koowheel self ngokulingene intengo isikuta kuyinto neze kulokho .Eqinisweni, Koowheel ungenzi ukhwaliti ongaphakeme umkhiqizo ukuphepha yekhasimende. Kuba Ukukhetha kakhulu uma kungase kulindeleke nezingane ukuligibela. I Self-Ukulinganisela Scooter K8 ngu KOOWHEEL kungase kube lula kakhulu ukusebenzisa, futhi wena nje kudingeka siqiniseke ukuthi uzokwazi ukubambelela kokuthile kuyilapho ugibele kuleli bhodi. Izici:
Hoverboard K8 yakhelwe e Milan, kungcono ekuqaleni EU emakethe ngezifiso
Hidden Yiphathe design, eyenziwa kalula
Valiwe isondo umgwaqo design, ukubamba kalula amehlo phakathi onobuhle isilinganiso
isisindo Slim nokukhanya
imigqa okuhlaza Pedal
Ziyini izinzuzo it has?
Koowheel musa ukwenza imikhiqizo ukhwaliti ongaphakeme
Hoverboard K8 uhlala Top izinga ejwayelekile
Sebenzisa kuphela abahlinzeki aphambili PCB, Motor, Ishaja
Enokwethenjelwa kakhulu 24V hoverboard 6.5inch
Ibhethri elihlangabezana nazo zonke izindinganiso zokuphepha
Ephansi izinga engaphelele
Ngakho, le self sekulinganisa isikuta enye bokuvikela izici nabagibeli. Khona-ke wabeka emlenzeni owodwa phezu swegway. Kulabo abafuna into esebenza kahle futhi ukulungele ukukhokha kuwufanele ke lokhu okukhethayo best.